Nin Sheegay In Uu Xildhibaanimo Ku Waayey Sawir Uu La Galay Nin Mucaarad Ah – Heemaal News Network
Iyadoo galinkii dambe ee shalay la dhaariyey inta badan xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Galmudug, ayaa waxaa isa soo taraya cabashooyin dhan walba leh oo laga qabo qaabkii loo soo xulay xubnahaas oo gaaraya 83 xildhibaan.
Ibraahim Xasan Cawaale waxa uu ka mid yahay musharaxiintii u tartaamayey kuraasta degmada Ceel-buur ka soo galaya baarlamaanka Galmudug, balse afar maalmood ka hor inta aan la guda galin soo xulidda kuraasta degmadaas ayaa lagu war geliyey in uu yahay nin lagu helay wax uu ku tilmaamay “Aayatul munaafaq.”
Sababta Ibraahim looga hor istaagay inuu u tartamo kursta deegaankiisa, waxuu ku sheegay inay tahay sawir uu sanadkii hore la galay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka, mucaaradna ku ah xukuumadda hada talisa oo iyadu gar wadeen ka ah arimaha doorashooyinka Galmudug.
Musharaxa is hor taaga lagu sameeyey Ibraahim Xasan Cawaale isagoo u waramayey warbaahinta waxa uu sheegay in Fiqi uusan u laheyn aqoon gooni ah, balse xilliga uu sawirkaas la galay ay ku kulmeen Hotel kuyaalla Muqdisho oo lagu soo bandhigayey Book uu qoray Cabdicasiis Xildhibaan.
Dad Ku Dhintay Duufaan Ku Dhufatay Dalka Maraykanka